.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash ဆိုဒ်အသစ် ၅
Flash ဆိုဒ်အသစ် ၅
ဒီနေ့တော့ flashsong ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်မယ့်ဆိုဒ်သစ်တစ်ဆိုဒ်လေး ညွှန်ပြပေးချင်ပါတယ်။
flash file လေးတွေ အစုံအလင်ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အလွယ်တကူလည်း download လုပ်ယူနိူင်ပါတယ်။
ကဲ အောက်မှာဆိုဒ်လင့်ပေးထားတယ်။ အမြန်လေးသာ သွားဒေါင်းကြပေတော့။ :)
နောက်ရက်တွေမှာ flash file လေးတွေထပ်တင်ပေးသွားပါမယ်။ အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ။
ဒီပိုစ့်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေမယ်ဆိုရင်တော့ credit ပြန်ပေးပေးပါ။
Posted by FlashSongCrazy at 03:19